कुन–कुन देशलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउन निषेध छ ? – Satyapati
कुन–कुन देशलाई ट्रान्जिट बनाएर नेपाल आउन निषेध छ ?
काठमाडौं । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलिएसँगै सरकराले अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक यात्रा नगर्न सरकारले आह्वान गरेको छ ।
पशुपतिनाथमा धनुर्मास पूजा, भोलि बिहानदेखि नियमित पूजाआराधना
नेपालमा देखियो नयाँ कोरोनाको संकेत, तीन जना संक्रमित
११४ जना कोरोना संक्रमित थपिए